NgoLwesibini, Aprili 6, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 UMat Chandler
Ukuziva okuntywilisayo esiswini sakho kunokuba kukuvela kwisikhangeli sakho. Sukujonga ngoku, kodwa uGoogle uceba ukukhupha isikhangeli esiza kuvumela abasebenzisi ukuba baphume ekulandelweni yi… google Analytics.
UGoogle, okhokela umnikezeli wokukhangela kunye namandla ehashe ngasemva kwendlela eyaziwayo yeGoogle Analytics kubahlalutyi sixhobo, izakuvumela abasebenzisi ukuba bakuphephe ukulandelwa sisixhobo sabo.
Oku kuzisa inani lemibuzo kunye nefuthe elinokubakho kubaphathi bewebhu kunye nabathengisi bewebhu abasebenzisa uGoogle Analytics ukulandelela ukugcwala kwiwebhusayithi, ikakhulu ukuba ukusetyenziswa kweplagin kuya kuyichaphazela njani ingqokelela yedatha yezithuthi. Oku kucenga omnye umbuzo obaluleke ngakumbi: kutheni uGoogle enokuyenza le nto xa uGoogle Analytics engaqokeleli idatha yobuqu kwasekuqaleni?
Izinto zokuqala zihlala, kuxhomekeke kwinto enokuqwalaselwa siqu idatha. Ngaba ulwazi lwakho lwe-ISP kunye nendawo yokuhlala kubalwa njengobuqu? I-Google Analytics ayiqokeleli iidilesi ze-IP ezizodwa, oko kuthetha ukuba lonke ulwazi olulandelelweyo alwaziwa kwaphela.
Ngaba oku kubeka uGoogle kudidi lwe abahanahanisi bebonke kuba banokugcina irekhodi elingenammiselo lomlando wokukhangela wabasebenzisi? Mhlawumbi kunjalo. Imbali yokukhangela ivumela uGoogle ukuba ahambise ezo ziphumo zophando zimangalisayo zenzelwe wena, kwaye ngelixa besenza ukuba kube lula ukuphuma kweli nqaku kunye nolwabo Isiko soBucala, abahambi ngokuthe ngqo kwindlela yabo yokuthengisa oku kunokwenzeka. Ikwakhankanya ukuba iqela labucala licele iKhomishini yoRhwebo ye-Federal ukuba vula uphando kwiGoogle Buzz, ke uGoogle unokuba uhlaba kancinci kubucala.
Isiphithiphithi besikhona ivolumu kwaye iprofayile ephezulu, kodwa impendulo yam yokuqala yaba Ke? Bangaphi abantu abaziyo ukuba baneProfayile kaGoogle, kungasathethwa ke ukuba banokuhlela le profayile kwaye bahlengahlengise useto lwabo lwabucala kunye nezinto abazikhethayo kwintengiso? Khange ndikwazi ukuyifumana ngokukhawuleza nayiphi na idatha enobungqina, kodwa ithini ipesenti yabasebenzisi bewebhu abasebenzisa iplagi yeAdBlock Plus yeFirefox? Akunakulunga ngokwaneleyo ukuyibeka ngaphandle kokuphambuka okusemgangathweni.
Inqaku lam elisisiseko kukuba kubaphathi bewebhu kunye nabathengisi, le ntshukumo inokuthengisa ngakumbi ukubhaliselwa Utyalo kwaye Iindidi zeWebhu njengabo emva kwekhethini bafuna ukufikelela kwidatha eninzi kangangoko kunokwenzeka. Kodwa oko kushukuma kunokuba yindlela yokuphendula edolweni kwingxaki engekabikho – kwaye ayinakuze ibekho.
tags: Uhlalutyoftci-google analyticsomniturePhuma kuyoprofileimidiya yokuncokola namhlanjeventurepadwndebgu
Inani labantu be Martech Zone
Epreli 6, 2010 ngo-9: 46 AM
Uhlalutyo lukaGoogle lukwimeko enobungozi. Kwelinye icala, bodwa - babonelela ngesisombululo esidibeneyo seAddsense kunye neAnalytics kwimarike. Kuya kufuneka benyanzelwe ukuba badibanise kunye nawuphi na umboneleli we-analytics. Kwelinye icala, abanakukwazi ukwenza ezinye zokudityaniswa okukhulu (okt. I-Facebook Analytics yiWebrends) kuba bayakhuphisana. Lo ubonakala nje esisidenge.
Epreli 6, 2010 ngo-2: 06 PM
Ndiyathemba ukuba iWebtrends icinga ukuba yile nto uyenzayo ukuze ufumane ibhonasi enye ye-helluva.
Ewe, iPat East eHanapin yayiTwitter 'ngoku kutsha nje. I-Wave yokuqala, emva koko yi-Buzz, emva koko ixhaswa yiCaffiene, ngoku le?
Kunjengokuba bezama ukugcina ungafumani monopoly ngokonakalisa iimveliso zabo de abanye babambe.
Epreli 6, 2010 ngo-4: 50 PM
Kulungile oku akulunganga, ngaphandle kokuba banendlela yokulandela abantu besebenzisa ikhowudi ebhloka. 🙂
Epreli 6, 2010 ngo-5: 10 PM
Ngokombono wethu waseMelika wobumfihlo oku akunangqondo, kodwa ukuze iGoogle Analytics ime kakuhle kumazwe aseYurophu (ebebuza abathengisi be-analytics kolu hlobo lokuphuma), uGoogle yinkokeli. Ukongeza, olu tshintsho luvumela uGoogle Analytics ukuba asetyenziselwe iisayithi zikarhulumente (njengoko ibambelela kwizikhokelo zikaRhulumente zase-US zabucala).
Cinga nje ngobunkokeli ngendlela eyahlukileyo. Inefuthe kubarhwebi, kodwa ndicinga ngokuhamba kwexesha, imigaqo yoorhulumente iya kubamba abathengisi be-analytics banganikeli into efanayo nale ndlela yokuphuma.
Epreli 7, 2010 ngo-2: 10 PM
Inqaku elinomdla. Khange ndicinge ngeemarike zaseYurophu. Enkosi ngokuqonda.